Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2013
2013-03-04 @ 02:57 in Andavanandro
Lozanao ry Fiainana, lozanao ry Fahafatesana. Saingy lozanao dia lozanao indrindra ry Fialonana sy ry Fahasahiana mamono olona vokatry ny Fialonana. Mampahatsiahy ny tantaran'i Kaina sy Abela ity tantara ity. Tsy hoe ny rahalahiny no namono azy, fa raiso amin'ny hoe mpiray tanindrazana aminy ihany no namono azy ary ao amin'ny baiboly kristiana dia toy ny rahalahy ihany no iheverana ny hoe mpiray tanindrazana.
Olon-tsotra iray, tena azo lazaina fa ao anatin'ny antsoina hoe sarambambem-bahoaka, tsy mba manana kaonty facebook. Tanora efa matotra satria nandingana ny fahaefapolo taonany, mpanaraka ny fivavahana Eglizy Katolika Apostolika Romana raha ny tsipalotro avy amin'ny firesany. Tsy fantatra akory izay tena anarany iray manontolo fa dia izay hoe "Ratsiry Mpanety" izay ihany no mba ahalalako azy. Raha mba nanao fitadiavana tamin'ny google aho ka io lohateny io no nampidiriko tao tamin'izaho nanoratra ity tsanganana bilaogy ity dia filazana fodiamandry avy ao amin'ny kaonty Facebook-n'ny Bandin'ny Bond (mizara secteur 5 na 6 ny fokontany 67ha avaratra andrefana ka secteur voalohany izany hoe Bond izany - I - II - III - IV - Bloc ary IVO izany fizarazarana izany) ihany no hany valiny tokana nivoaka. Malaza amin'ny fanetezana izy ary sahiko ny milaza fa sangany eto amin'ny firenena izy raha amin'io taranja iray io saingy folaka an-dantony ny lehilahy. Vao nisandratra sy nivelatra dia notapahina sahady halazo.
Fitantarana nataony tamina namana mpiara-miasa, izay mpihety ao aminy, no nandrenesana fa ao amin'io mpanety io ihany no mahazatra ilay mpihira malagasy fanta-daza hoe Firmin. Indray mandeha tokoa raha hiseho sehatra tamin'ny fahitalavitra ity mpihira ity indray Asabotsy dia izy no teo alohako tamin'ny filaharana; ary voalaza fa isaky ny hanao fampisehoana ity artista ity dia mihety ao ny marainan'ny fampisehoana. Niteny, hono, ilay artista fa ao amin'ity mpanety voatonona anarana ity ihany no mahay manety ny volony. Ny rahalahiko iray tampo amiko izay monina any Toliary, dia nitady izay heverina ho mahay manety tao amin'ity tanan-dehibe iray ity fa tsy mahasahy miditra mpanety any fa isaky ny tonga eto an-drenivohitra ihany vao mihety ao amin'ity ranamana iray ity. Hevero anefa fa amam-bolana ity rahalahiko ity vao miakatra aty an-drenivohitra dia azonao vinaniana avy amin'izany ny halavan'ny volony rehefa tonga aty izy fa dia teny fohy dia fohy tokoa ny volo ny ampitson'ny ahatongavany eto.
Inona no mba fantatro aminy? Lehilahy fotsifotsy kely izay izy. Mipiripirina fa tsy mba mpihetraketraka. Matotra amin'ny asany izy satria mitandro ny fahadiovan'ny fitaovany ankoatra ilay fahaizany mihety. Mipetraka any Ankadindratombo, kaominina Alasora, fa any 67ha avaratra andrefana, tanàna nahabe azy ihany no tena mahazatra azy amin'ny fanetezana sady ahalalàn'ny olona azy. Ny tena mahavariana dia na dia nasondrony 2000 ariary aza ny fihetezana tao aminy, izay azo atao hoe lafo ary tsy misy loatra ny mahasahy mihety amin'izany sara izany dia mbola mankao aminy ihany ireo izay efa zatra nihety taminy satria ao ihany no mahafa-po ireo mpihety aminy. Ny mpihety hafa anefa dia 1000 ariary ka hatramin'ny 1500 ariary no fihetezana, ary 1700 ariary no hitako lafo indrindra nefa tsy nahafapo ahy mihitsy fa tonga amin'ilay fitenenana hoe mba nohetezana ny volo. Andro andavanandro izy, amin'ny ankapobeny no azo alaina hihety fa rehefa andro Asabotsy kosa dia tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy milahatra ao amin'ny trano fiasany daholo. Ny toera-piasany kosa dia tsotsotra ihany, tsy tranohazo anefa fa trano biriky. Tsy mampatahotra ny olona tsotra no miditra amin'izany toerana izany ary tsy mahamenatra ny mpanankarena ihany koa.
Inona no notantaraina tamiko? Tsy misy mampatahotra azy ny kopim-bolo rehetra fa na dia vao lamaody any ivelany ireny aza dia efa hainy sahady. Voalaza fa tsy dia nianarany izany fanetezana izany fa toy ny tonga dia ao anatin'ny rany mihitsy, toy ny talentany avy hatrany. Raha nihety farany tao aminy ity namana mpiara-miasa amiko iray, dia niresaka, hono, ilay mpanety fa efa lasa alain'ny Karana hihety any aminy ilay mpanety ary tsy vola kelikely no omen'ny (na ilay) Karana azy. Fiarakodia 4X4 mihitsy no akàna azy. Ny mpamilin'io Karana io no mpihety tao aminy, ka angamba noho ny fahitany ilay vola tsara hety no nahatonga ny patiraony nanontany hoe iza no mpanetiny sy ny hoe azo alaina hihety azy any an-tranony ve ilay mpanety.
Ahiahiko, olona manodidina sy mpifanerasera aminy ihany no namono na nampamono azy satria mandeha ny asan'ity ranamana iray ity. Olona mailo sy mahafantatra ny toerana atahorana rehetra ao 67ha manko izy ary milaza amin'ireo mpihety tratra hariva ao aminy ireo toerana tsy azo andalovana sy mampidi-doza ao amin'io faritra io. Mahavariana ihany anefa ny nandrenesana fa maty nisy namono hariva tany 67ha atsimo izy. Tsy mampino ny nahafatesany.
Alahady harivan'ny 3 marsa 2013 aho vao nahare ny fodiamandriny raha ny alatsinainy 25 febroary 2013 kosa no voalaza ho nahafatesany ary ny alarobia 27 febroary kosa no nandevenana azy. Mampahery ny fianakaviana ary indrindra ny vady aman-janaka izay nilaozany tsy satry.
Jentilisa 4 marsa 2013 amin'ny dimy latsaka dimy maraina